China Isostatic Ukucofa Grafayithi iibhloko yoMvelisi kunye noMthengisi | Jinglong
Ukucinezelwa kwe-Isostatic Grafayithi iibhloko
Ukucinezelwa kwe-Isostatic Graphite luhlobo olutsha lwezinto zegrafayithi eziphuhliswe kwiminyaka ye-1940 ngothotho lweepropathi ezigqwesileyo. Ukucofa i-Isostatic Graphite kunokumelana nobushushu. Kwigesi ye-inert, amandla ayo oomatshini ayonyuka ngokunyuka kwamaqondo obushushu, efikelela kwixabiso eliphakamileyo malunga ne-2500 ℃ .Kuthelekiswa negraphite eqhelekileyo, ubume be-graphite ye-isostatic icekeceke ngakumbi, intekenteke, kwaye iyalingana.
Kukuqina kokuqina okwandayo kwe-thermal kusezantsi kakhulu, ukunganyangeki kwayo kukugqwesa, kwaye isotropic yayo, ukumelana neekhemikhali kukomelele, okwangoku, ine-conductivity efanelekileyo yokuhambisa umbane kunye nombane kunye nokusebenza ngokugqwesileyo. Isostatic Pressing Graphite Blocks zingasetyenziselwa i-EDM graphite electrode, unyango lwamanzi, i-electrode eqhubayo, i-anode cathode block grafite, i-electrolytic graphite electrode, kunye neenjongo zokuthambisa. Grafayithi ibhloko yethu iimpawu ezixineneyo-umthamo omkhulu, resistivity ephantsi, ukumelana igcwala, nokumelana, ukumelana lobushushu eliphezulu, conductivity elungileyo, njl
Ubungqingili obungcono: Ubungqingili bezinto ezingcono buthetha ixesha elide lobomi kunye nolawulo olomeleleyo lokumelana nezinto zokufudumeza.
Ubukhulu obukhulu: sinokunikezela ngeebhloko ezikwere ezinkulu njenge-2150 * 1290 * 500mm kunye neebhloko ezijikelezileyo ezinkulu njenge-D1450 * 1200mm & D1100 * 1200mm. ubungakanani beenkozo 10um
Ukucoceka okuphezulu: Ekufuneni kwabathengi, sinokubonelela ngeemveliso ezinomlotha ngaphantsi kwe-20ppm / 30ppm. Kuba semiconductor kunye nezinye isicelo esithile, isiqulatho ash zingalawulwa ngaphantsi kwe 5ppm.
Egqithileyo Grafayithi iinxalenye eziko ezincamathelayo
Okulandelayo: Ukucinezelwa kwe-Isostatic Silicon Carbide Graphite Crucible: